सलमान अंकलमाथि चढेँ, खुब मजा आयो : हर्षाली | Screennepal
सलमान अंकलमाथि चढेँ, खुब मजा आयो : हर्षाली
२०७२, ७ श्रावण बिहीबारscreennepalCeleb bites, feature0
सलमान खानको फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ मा मुन्नीको भूमिकामा देखिएकी सानी बालिकालाई अहिले आफ्नो नामले भन्दा मुन्नीका रुपमा चिन्न थालिएकी छन् । हर्षाली मल्होत्रालाई धेरैले मुन्नी वा शाहिदा नामले चिन्छन् । सुटिङका क्रममा उनी ६ वर्षकी मात्र थिइन् । हाल कक्षा २ मा अध्ययनरत उनले जुन ३ मा जन्मदिन मनाएकी छन् । थोरै बोल्ने हर्षाली र उनकी आमा काजल मल्होत्रासँग भारतीय एक अनलाइन पोर्टलले गरेको कुराकानीको नेपाली अनुवाद :
सलमान खानसँग फिल्म खेल्ने थाहा पाउँदा तिमीलाई कस्तो लाग्यो ?
हर्षालीः सुपर एक्साइटेड। म सुपर एक्साइटेड भएकी थिएँ।
सलमान अंकल कस्तो लाग्यो?
हर्षालीः सलमान अंकल राम्रो हुनुहुन्छ।
सलमान अंकलसँग कति रमाइलो गरेउ?
हर्षालीः धेरै रमाइलो गरेँ। टेबल टेनिस खेलेँ। साइकल कुदाएँ। खुब रमाइलो गरेँ।
त्यो बेला कुन कुन ठाउँ घुम्ने अवसर मिल्यो?
हर्षालीः दिल्ली, करजत, राजस्थान, पञ्जाब र कस्मिर
यी मध्ये कुन ठाउँ सबैभन्दा राम्रो लाग्यो?
हर्षालीः कस्मिर र पञ्जाब
कस्मिरमा सबैभन्दा राम्रो के रहेछ ?
हर्षालीः त्यहाँ हिउँ छ। मैले हिउँ खेलेँ।
तिमीसँग हिउँ खेल्ने बेलामा को थियो?
हर्षालीः कबिर अंकल (निर्देशक कबिर खान) र नवाज (नवाजुद्दीन सिद्दीकी) सँग खेलेँ।
तपाइँ नवाज र सलमान अंकलको काँधमा पनि चढेउ?
हर्षालीः (हाँस्दै) हँ नवाज र सलमान अंकलमाथि चढेँ। खुब मजा आयो।
सलमान खानले पहिलो पटक देख्दा के भने?
काजल: उनले (हर्षाली) ले सलमानलाई भनिन् मलाई तपाइँ जस्तो सुपरस्टार बन्नुछ। त्यसपछि सलमानले जवाफ दिए— हुन्छ।
तिमीलाई मनपर्ने हिरोइन को को हुन् ?
हर्षालीः करिना कपुर र कट्रिना केफ
अहिले तिमी सानै छोउ ठूलो भएर के बन्ने इच्छा छ ?
हर्षालीः अभिनेत्री बन्न चाहन्छु । करिना कपुर र कट्रिना जस्तो एक्ट्रस बन्न चाहन्छु।
बजरंग भाईजानमा तिम्रो सबैभन्दा राम्रो दृश्य कुन छ ?
हर्षाली: अन्तिमको दृश्य मलाई सबैभन्दा मन परेको दृश्य हो। त्यही राम्रो लाग्छ।
फिल्मको काम सुरु हुँदा कति कक्षामा पढ्दै थियौ ?
कागल: त्यतिबेला उनी एक कक्षामा पढ्दै थिइन्। हामीले प्रिन्सिपलसँग विशेष अनुमति माग्यो। उनले अनुमती दिए। उनले फिल्मका क्रममा स्कूलको अध्ययन पनि गरिरहिन्। परीक्षामा राम्रो ग्रेड आएको छ। सबै थोक गरेर त्यो लगभग ६—७ महिनाको पूरा सेड्युल थियो।
कुन बेलादेखि उनले अभिनय गर्न थालेकी हुन्?
काजलः दुई अढाई वर्षकी हुँदै मोडलिङ सुरु गरेकी हुन्। लगभग चार वर्षकी हुँदा हामीले उनको झुकाब अभिनयतर्फ बढी भएको देख्यौं। त्यसपछि हामी पूरै परिवार दिल्लीबाट मुम्बइ बसाइँ स-यौं। जोधा अबकर, कबूल है, लौट आओ तृषा जस्ता सरियिलमा पनि उनले अभिनय छ।
आफूलाई ठूलो पोस्टर वा स्क्रिनमा देख्दा उनको प्रतिक्रिया कस्तो थियो?
काजलः दुई वर्षअघि हामी एउटा फिल्म हेर्न गएका थियौं। उनले त्यहाँ भनिन्, मम्मी मलाई यो ठूलो पर्दामा देखिनु छ। अहिले पोस्टरमा आफूलाई देखेर उनी निकै खुशी भइन्। फिल्ममा आफूले आफूलाई देखेर अन्तिमको दृश्यमा आँसु खसालिन्।
फिल्म अलावा तिमीलाई के मनपर्छ?
हर्षालीः डान्स गर्न मनपर्छ।
फिल्ममा को को राम्रो लागे त ?
हर्षाली: सलमान अंकल, कट्रिना कैफ, नवाज अंकल
अनि हर्षाली ?
हर्षालीः म त मैसँग छँदै छु नि।
Previous Postबिक्रमको ‘मान्नै मान्दिनन् मोरी’ (भिडियोसहित) Next Postनेपाली चलचित्रमा 'कथै कमजोर’